NUSOJ Oo Cambaareysay Caburinta Lagu Hayo Wariyeyaasha Ka Howlgala Deegaannada Ay Maamulaan Puntland Iyo Ahlu sunna – Radio Muqdisho
NUSOJ Oo Cambaareysay Caburinta Lagu Hayo Wariyeyaasha Ka Howlgala Deegaannada Ay Maamulaan Puntland Iyo Ahlu sunna
Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa cambaareeyay dhibaatooyin ka soo food saaray Wariyeyaasha Soomaaliyeed maamulada dalka ka jira oo maalmihii la soo dhaafay soo wajahayay.
War Qoraal Ah oo ka Soo baxay ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed NUSOJ ayaa lagu cambaareeyay caburinta xariga iyo cabsi galinta maamulka Ahlusunna Waljamaaca uu ku hayo Suxufiyiinta ka howlgala Guri-ceel oo uu sheegay in ay xireen maamulkaasi idaacadda Radio Galgaduud, iyo xariga loo geystay wariyaha warbaahinta Qaranka ee Guri-ceel Osman Mohamed Adan oo aakhirkii saakay ka soo masaafuriyay magaaladaasi islamarkaana Muqdisho ku sugan.
Sidoo kale NUSOJ ayaa cambaareeysay Xariga Maamulka Puntland ay u geysteen Agaasimaha Idaacadda Daljir qaybteeda Garowe iyo waliba Wariye Jamaal Faarax Aadan oo ka mid ah shaqaalaha xarunta Daljir ee Garowe oo uu sheegay in maamulka Puntland uu ka codsanayo in ay ilaaliyaan xoriyadda saxaafada islamarkaana ay ka daayaan caburinta.
“Waxaan cambaareyneynaa, maamulada Puntland iyo Ahlusunna oo isku day cad looga gonleeyahay aamusin, xorriyadda saxaafadda ay ka mid yihiin xarig yo iyo xiritaanka xaruuma warbaahineed.”
“Maamulka Puntland iyo Ahlu sunna waa in ay tixgaliyaan xorriyadaha warbaahinta islamarkaana ay joojisaa caburinta ayna ogolaadaan warbaahinta iyo suxufiyiinta xoriyadooda.
Maamulka Puntland 20-ka May 2015 ee Arbacadii la soo dhaafay ayaa xiray, xafiisyada telefishinka Qaranka Soomaaliyeed (SNTV) ee Puntland. taasi oo ay ay ku sheegtay NUSOJ mid niyad jab ku ah suxufiyiinta Soomaaliyeed.
21 May 2015, maamulka Puntland ayaa amray in la xiro Wariye Jaamac Deperani, oo ka mid ah wariyeyaasha ka shaqeeya deegaannada maamulka Puntland una shaqeeya TV-ga Somali Channel oo fadhigiisu yahay London.